China Top mma PSA oxygen osisi maka ire ọkụ na ndịda America ọwụwa anyanwụ Asiawith mma obi ike nke elu arụmọrụ emepụta na suppliers | Ma ọ bụ
Top mma PSA oxygen osisi maka ire ọkụ na ndịda America ọwụwa anyanwụ Asiawith mma obi ike nke elu arụmọrụ
1: Akwụkwọ na pulp ụlọ ọrụ maka Oxy ọcha na delignification
2: industrieslọ ọrụ iko maka ịba ụba ọkụ
3: industrieslọ ọrụ na-arụ ọrụ maka ime ka ikuku oxygen na-enwu ọkụ
4: Chemical oru maka ọxịdashọn Jeremaya mere na incinerators
5: Mmiri na mmiri mmiri
6: gasgbado ọkụ gas, ịcha na brazing
7: Azụ azụ
8: Ulo oru iko
Oxygen bụ gas na-enweghị ụtọ. O nweghị isi ma ọ bụ ụcha. Ọ mejupụtara 22% nke ikuku. Ikuku a so na ikuku ndi mmadu na ekuru. Ihe a n’ahụ n’ahụ mmadụ, Anyanwụ, n’oké osimiri na ikuku. Enweghị oxygen, ụmụ mmadụ agaghị adị ndụ. Ọ bụkwa akụkụ nke usoro ndụ kpakpando.
Ojiji Oxygen na-ejikarị
A na-eji gas a arụ ọrụ dị iche iche na ngwa ọrụ mmepụta ihe. A na-eji ya eme acids, sulfuric acid, nitric acid na ogige ndị ọzọ. Mostdị ya kachasị arụ ọrụ bụ ozone O3. A na-etinye ya na mmeghachi omume kemịkal dị iche iche. Ebumnuche bụ ịkwalite ọnụego mmeghachi omume na oxidation nke ogige achọghị. A na-achọ ikuku ikuku na-ekpo ọkụ iji mee nchara na ígwè na ọkụ ọkụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta ọla kọpa na-eji ya ebibi nkume.
Ojiji na Industrylọ Ọrụ
Ndị ụlọ ọrụ na-eji gas eme ihe maka ịcha, ịgbado ọkụ na agbaze ọla. Igwe ahụ nwere ike ịmị ọkụ nke 3000 C na 2800 C. A chọrọ nke a maka ọkụ ọkụ oxygen na ikuku oxy-acetylene. Typicaldị ịgbado ọkụ na-aga dị ka nke a: a na-achịkọta akụkụ ọla.
A na-eji ọkụ dị elu na-agbaze ha site na ikpo ọkụ nkwụsị. A na-agbaze nsọtụ ma sie ike. Iberi ígwè, a na-eme ka otu njedebe dị ọkụ ruo mgbe ọ na-acha uhie uhie. A na-eme ka ikuku oxygen dịkwuo ruo mgbe ihe na-acha uhie uhie na-ekpo ọkụ. Nke a na-eme ka ọla dị nro dị nro ka enwere ike ịme ya iche.
Oxygen dị na mbara igwe
Achọrọ gas a iji mepụta ume na usoro ọrụ ụlọ ọrụ, ndị na-enye ọkụ na ụgbọ mmiri. A na-ejikwa ya n'ụgbọ elu na ụgbọ ala. Dị ka mmiri oxygen, ọ na-agba mmanụ ụgbọelu. Nke a na - emepụta ihe dị mkpa na mbara igwe. Oghere ndị Astronauts nwere nso ikuku oxygen dị ọcha.
Nke gara aga: Emeputa High Ọcha Nitrogen Equipment PSA Nitrogen Generator
Osote: Medical Oxygen Generator Hospital Oxygen Generator Medical Oxygen Generator Akụrụngwa
Oxygen Liquid kacha mma na Nitrogen na Argon Osisi
Oxygen Liquid kacha mma na osisi nitrogen